Tao anatin’ny 24 ora, 43 ireo nifindran’ny tsimokaretina: olona dimy tratran’ny coronavirus eny Manjakaray sy Anjanahary | NewsMada
Mirongatra tanteraka ny valanaretina ary tena mbola mampanahy. Nihoatra ny 40 hatrany ireo nifindran’ny coronavirus tato anatin’ny andro vitsy. Tsy afa-bela ny any Toamasina. Tonga eny Manjakaray sy Anjanahary koa izany izao ny coronavirus.
« Mandehaleha eny rehetra eny ny valanaretina, amin’izao fotoana izao ary efa saika voatonona avokoa ny kartie rehetra », hoy ny eo anivon’ny CCO, omaly. Tsy afa-bela fa anisan’ny nahitana olona tratran’ny coronavirus, efatra eny Manjakaray ary iray eny Anjanahary, araka ny tatitry ny mpitondra teny, ny Pr Vololontiana Hanta. Tafiditra ao anatin’ireo tranga vaovao miisa 43 ireo olona miisa dimy eto Antananarivo ireo.
Miisa 147 ireo nataon’ny Institut Pasteur (IPM) sy ny laboratoaran’izy ireo fitiliana ka nahitana ireo olona 20 avy any Toamasina eto Antananarivo sy ny tranga vaovao tany Atsinanana miisa 17.
448 ireo tratran’ny coronavirus
Ho an’ny CICM eny Ankatso kosa indray, 125 ireo nanaovana fitiliana ka tratran’ny coronavirus ny enina. « Efatra avy eny Anjanahary ary iray avy eny Manjakaray. Iray kosa ny avy any Toamasina », hoy ihany ny eo anivon’ny CCO.
Tafakatra 448 izany izao ireo tratran’ny coronavirus eto amintsika, hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Na izany aza, nisy ireo efatra sitrana ka 135 ireo nalefa nody rehefa nahafeno ny fepetra amin’ny fahasitranana. Miisa 311 izany ireo mbola tsaboina sy arahi-maso eny anivon’ny hopitaly, amin’izao fotoana izao.
Roa hafa ahina mafy ny fahasalamany
Etsy an-daniny, misy roa ahina mafy koa anefa ny toe-pahasalamany any Toamasina, araka ny nambaran’ny CCO ihany. Mijanona ho roa kosa ireo matin’ny coronavirus eto amintsika.
Araka izany, mahazo vahana tanteraka any Toamasina izany hatreto ity valanaretina ity, raha miainga amin’ireo antontanisa ireo. Dimy amin’ireo 43 ireo ihany no avy eto Antananarivo fa avy any Atsinanana avokoa ny ambiny. Voamarika koa fa nihoatra ny 30 hatrany ny isan’ireo tratran’ny covid-19 tato anatin’ny telo andro farany…